ကလေးငယ်တွေရဲ့ အမူအကျင့်ထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးသင့်သော တန်ဖိုးရှိသော ဘဝသင်ခန်းစာ (၁၀) ခု
Home Parenting Parent Guide ကလေးငယ်တွေရဲ့ အမူအကျင့်ထဲမှာ ထည့်သွင်းပေးသင့်သော တန်ဖိုးရှိသော ဘဝသင်ခန်းစာ (၁၀) ခု
သင့်သားသမီးတွေကို ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိသော ဘဝသင်ခန်းစာတွေကို ပေးမလဲ?
ကလေးက သင့်စောင့်ရှောက်မှုအောက်က အဖိုးတန်လက်ဆောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ သူတို့ကို ပုံသွင်းဖို့ ၁၈နှစ်ခန့်အချိန်ရှိပြီး သူတို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုမှာ ထူးချွန်သော လူသားတွေဖြစ်လာစေဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘယ်သူကမှ ပြီးပြည့်စုံသော မိဘရယ်လို့ မရှိတာကြောင့် သွန်သင်ခြင်းလမ်းတစ်လျှောက်မှာ အမှားအနည်းငယ်လုပ်မိခြင်းက သာမန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကလေးကို သင်ပေးနိုင်သော တန်ဖိုးအရှိဆုံး သင်ခန်းစာတွေထဲက တစ်ခုက သင့်ကို ထူးချွန်သော နိုင်ငံသားနှင့် စံပြလူသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း လေးစားခံရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သင့်အနေနဲ့ သင့်ကို ပေးနိုင်သော တန်ဖိုးရှိသော ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။
၁။ ရိုးသားမှုဟာ အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးမူဝါဒဖြစ်တယ်
သင့်ရဲ့ ကလေးတွေက သင့်ပါးစပ်မှ ထွက်သမျှ စကားလုံးတိုင်းကို နားထောင်ကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နေမကောင်းမဖြစ်ဘဲ အလုပ်ကို ဖျားနာနေကြောင်း၊ အလုပ်မလာနိုင်ကြောင်း တိုင်ကြားသံတွေကို သင့်ကလေးက ကြားတဲ့အခါ သင့်ကို အံ့ဩပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို ဆုံးမထားတာတွေနဲ့ သင်လက်တွေ့လုပ်နေတာတွေက အံ့ဝင်ခွင်ကျမဖြစ်တဲ့အခါ သင့်လုပ်ရပ်တွေကိုပဲ သူတို့အတုခိုးကြပါလိမ့်မယ်။ သင့်က သူတို့ရဲ့ နမူနာအဖြစ် စောင့်ကြည့်ခံနေရတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
၂။ လူတိုင်းက ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတာ၊ အပြုအမူကောင်းတာကို သဘောကျကြတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို စားသောက်ဆိုင်က စားပွဲထိုးကိုလည်း ပြောနိုင်ရပါမယ်။ ပါးစပ်ပလုတ်ပလောင်းနဲ့ စကားမပြောဖို့၊ လမ်းကူးဖို့ ခက်ခဲနေသော သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ကူညီပေးဖို့၊ လူစိမ်းနှစ်ယောက်စကားလက်ဆုံကြတဲ့အခါ တစ်ဖက်လူရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို မြင်တတ်ဖို့ သင်ပေးထားတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေတိုင်း သင့်ကို ကျေးဇူးတင်နေပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကျန်းမာသော စားသောက်နည်းအလေ့အထကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းက မရှိမဖြစ်အရေးပါသော အရာဖြစ်ပါတယ်
သင်က သင့်ကလေးကို အစားအသောက်ကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသူဖြစ်တာကြောင့်၊ သူတို့အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်စွာ စားသောက်ဖို့ သင့်မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အာဟာရမျှတစွာ စားသောက်တတ်စေဖို့၊ ဘယ်အချိန်မှာ အသားငါးစားသောက်ရမယ်ဆိုတာ သိစေဖို့နှင့် အသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပြည့်ဝမျှတသော အစားအသောက်တွေရဲ့ အရေးပါပုံကို သူတို့ကို ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကို အာဟာရဖြစ်စေသော အစားအသောက်တွေကို ကျွေးမွေးတဲ့အခါ ကလေးရဲ့ စားချင်စိတ်ကို မြူဆွယ်ဖို့ ကလေးကြိုက်တတ်သော သရေစာတစ်ခုခု (သို့) ချောကလက်တို့ဖြင့် လာဘ်ထိုးဖို့ ကြိုးစားခြင်းက မှားယွင်းသော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို စိတ်ခံစားမှုအတွက် အစားအစာကို လှည့်စားတတ်အောင် သင်ပေးခြင်းက စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ သင့်ကလေးတွေကို အစားအသောက်ဘက် အာရုံလွှဲသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါတွေက အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ အဝလွန်ခြင်း၊ အာဟာရမပြည့်ဝခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ကလေးကို အစားအသောက်နှင့် ကျန်းမာသော ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာ သင်ကြားပေးဖို့က သင့်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ရိုသေလေးစားခြင်းက ဘဝတစ်ခုရဲ့ ရှိသင့်သော အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
လေးစားမှုက တစ်ခြားသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးမျိုးရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အခွင့်အာဏာရှိသူတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ်လေးစားခြင်းက လူကောင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့ အသွင်အပြင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကို လေးစားမှုရှိလာသောအခါ ဒီအရာက တစ်ခြားလူတွေကို စာနာမှုနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် တန်ဖိုးရှိစေသော ခံစားမှုကောင်းတွေ ရရှိစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီမှုတွေကို လေးစားတဲ့အခါ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး (သို့) လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကို ပုံမဖော်တော့ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ သင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒီဘဝသင်ခန်းစာအောက်က နောက်ဆက်တွဲကောင်းကျိုးတွေကတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ တစ်ခြားသူတွေကို ကြင်နာမှုပြခြင်း၊ မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော သန့်ရှင်းမှုနှင့် လူတိုင်းအပေါ် အခြေခံလူ့လေးစားမှုပြသခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အမြဲတမ်း အနိုင်ယူလို့ မရဘူး
သင့်ကလေးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ရက်တွေလည်း ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းနိမ့်ကျနေသော နေ့ရက်တွေလည်းရှိနိုင်သလို ကျောက်သားတွေရဲ့ အောက်ခြေကလည်း သူတို့ရဲ့ ဘဝအသစ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါမယ်။ ကျရှုံးမှုတွေကို လက်ခံဖို့ ခက်ပေမယ့် အရာအားလုံးမှာ ပြီးပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘဝသင်ခန်းစာယူစရာတွေလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုဆိုရင် ဘဝကြီးကလည်း အဓိပ္ပာယ်မဲ့နေပါလိမ့်မယ်။
သူတို့အဖွဲ့မဟုတ်ရင်တောင် အနိုင်ရတဲ့အဖွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုသင့်ကြောင်း သင့်ကလေးကို နားလည်အောင် ပြောပြပါ။ အရှုံးသမားတွေကို ဘယ်သူကမှ မကြိုက်ပေမယ့် သင်အနိုင်ရသည်ဖြစ်စေ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ ဂိမ်းထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုက အဓိကအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ဒီတန်ဖိုးရှိသော ဘဝသင်ခန်းစာတွေကို သူတို့ဘဝရဲ့ ရှုထောင့်များစွာမှာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
၆။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု
အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့လူတွေက သဘာဝအားဖြင့် ကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူတွေဖြစ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတော်ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ သင်က အမြဲနောက်ကျနေပြီး ဘယ်နေရာကိုမှ အချိန်မှီအရောက်မသွားနိုင်တဲ့ မိဘလား? သင့်ကလေးတွေက ဒီအလေ့အထတွေကို ဂရုတစိုက်ကြည့်နေကြပြီး နောက်ကျမှ သွားလည်း လူတွေက လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ အချိန်ကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲခြင်းက ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက သင်ယူခဲ့သင့်သော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ သူတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို တိုးလာစေပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ဖို့လည်း ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
၇။ တာဝန်ကျေခြင်းရဲ့ ဂုဏ်ယူမှုကို သင်ကြားပေးပါ
သူတို့ကို အိမ်မွေးကြောင်၊ ခွေး (သို့) ယုန်လေးတွေရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေမှာ ပါဝင်စေပါ။ ဒီအရာက သူတို့ကို အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုပေါင်းဖော်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်စေနိုင်ပြီး သူတို့တစ်သက်လုံး သူတို့နဲ့အတူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်မယ့် ဘဝသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှုဟာ စိတ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးတယ်
ဘဝမှာ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို လေ့ကျင့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဖက်လူနဲ့ ပတ်သက်နေသလို ထင်ရပေမယ့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းက သင်ကိုယ်တိုင်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ သင်အပေါ် အမှားလုပ်မိတဲ့ လူတွေကို ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့ သင်ယူတဲ့အခါ ဆိုးရွားသော စွမ်းအင်တွေက သင့်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုတာလည်း သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။
ဒါ့အပြင် တစ်ခြားလူဆီကနေ ခွင့်လွှတ်မှုကိုလည်း တောင်းရမ်းဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေလည်း တောင်းပန်ရဲတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၉။ စာနာစိတ်ရှိခြင်းက သင့်ကို လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်စေပါတယ်
သင့်ကလေးတွေကို လူတွေအတွက် တံခါးကို ကိုင်ထားဖို့၊ အသက်ကြီးသူရဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို ကူညီပေးဖို့ (သို့) ဆိုးရွားသော နေ့တစ်နေ့မှာ တစ်စုံတစ်ဦး ပွေ့ဖက်ထားပေးဖို့ သင်ပေးပါ။ တစ်ခြားလူကို သနားကြင်နာပြခြင်းက မှားယွင်းသောအရာမဟုတ်ဘဲ သင့်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူတစ်ဦးဖြစ်စေပါတယ်။
၁၀။ အသစ်သောအရာတွေကို သင်ယူခြင်းက ပျော်စရာကောင်းပါတယ်
စာသင်ကျောင်းတွေက ပျင်းစရာကောင်းပေမယ့် သင်ယူခြင်းကတော့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လောက်အထိ အံ့ဩဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ သင်ပေးမယ့် သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ လှည့်ကွက်လေးတွေကို လုပ်ပါ။ ပညာရေးကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်းက မူကြိုမှစပြီး ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၁၁။ အလုပ်ကြိုးစားမှုမရှိဘဲ ဘယ်အရာမှ လွယ်လွယ်မရဘူး
သင့်ကလေးအတွက် အရာအားလုံးကို ငွေလင်ပန်းနဲ့ ဆက်သနေမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ အလုပ်ကြိုးစားမှုရဲ့ တန်ဖိုးကို ဘယ်တော့မှ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝမှာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ထောက်ပံ့ဖို့ အလုပ်လုပ်ရမယ်။ သူတို့လိုချင်တဲ့ဘယ်အရာမဆို အားထုတ်မှုတစ်ခုတော့ ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတာ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကို မက်လုံးပေးအစီအစဉ်များစွာဖြင့် ငွေကြေးရဲ့ တန်ဖိုး သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Previous articleမိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၉)မျိုး
Next articleမိခင်တိုင်းလိုအပ်တဲ့ ဆရာအတတ်ပညာ (၅)ခု